China Alloy Horn 35khz 500w Handheld Ultrasonic Welder fekitori uye vagadziri | Powersonic
Chiwanikwa Kana Titanium
500w yakabata ruoko ultrasonic welder
35khz inobata ruoko ultrasonic welder
35khz ultrasonic ruoko welder
35kHz Ultrasonic Ruoko Welder Inotakurika Ultrasonic Brass Inoisa Zvishandiso
Chii‘s iyo musimboti of Ultrasonic epurasitiki Welding?
Kana ultrasonic ichiita pane iyo thermoplastic epurasitiki yekubata pamusoro, yakakwira-frequency kudengenyeka kwemakumi ezviuru zvenguva pasekondi. Iyi yepamusoro-frequency vibration inosvika kune imwe amplitude, uye iyo ultrasonic simba inopfuudzwa kune iyo weld zone kuburikidza neyekumusoro weldment, nekuti iyo weld zone ine yakakura acoustic kuramba, saka yemuno yakanyanya tembiricha inogadzirwa. Zvakare, nekuda kwehurombo hwekupisa hwekupisa hwepurasitiki, haugone kuparadzaniswa nenguva uye kuunganidzwa munzvimbo yesimbi, kuitira kuti zviso zvekubata zvepurasitiki zviviri zvinyunguduke nekukurumidza, uye mushure mekumwe kumanikidzwa, zvinosanganiswa kuita chimwe. Kana iyo ultrasonic wave yamira, rega kumanikidza kupfuure kwemasekondi mashoma kuti kuisimbise, nokudaro ichiumba yakasimba mamorekuru ngetani yekumisikidza zvinangwa, simba rekusimbisa rinogona kuve padhuze nesimba rezvinhu zvakasvibirira. Iko kunaka kweiyo ultrasonic epurasitiki kutenderera kunoenderana neakakura eiyo transducer yekutengesa musoro, iyo yakamanikidzwa kumanikidza uye nguva yekutenderera. Iyo yekumhanyisa nguva uye iyo yekumusoro musoro kumanikidza inogona kugadziridzwa. Iko kukura kwakatemwa neanoshandura uye runyanga. Izvi zvitatu zvinhu zvine kukosha kwakaringana kune mumwe nemumwe. Kana simba racho rakapfuura kukosha kwakakodzera, hunyunguduka hwepurasitiki hwakakura, uye izvo zvinhu zvekunamatira zvinokamhina. kana simba racho riri diki, iyo simbi yakaoma, uye kumanikidzwa kunoshandiswa hakugone kuwedzerwa. Uku kumanikidza kwakanyanya chigadzirwa chehurefu hwedivi rechikamu chakasunganidzwa uye kumanikidza kwakakwana pa1 mm yemupendero. Ultrasonic Welding iri yepamusorosoro tekinoroji yekutengesa thermoplastic tekinoroji. Akasiyana-siyana thermoplastic rabha zvikamu zvinogona kugadziriswa neiyo ultrasonic kutenderera pasina kuwedzera solvent, yekunamatira kana zvimwe zvinobatsira zvigadzirwa. Izvo zvakanakira kuwedzera kugadzirwa uye kudzikisa mutengo. kunatsiridza chigadzirwa mhando.
Ultrasonic epurasitiki yekutenderera musimboti: Iyo jenareta inogadzira 20KHZ, (kana 15KHZ) yakakwira-voltage, yakakwira-frequency chiratidzo, kuburikidza neshanduro sisitimu, inoshandura iyo chiratidzo kuita yakakwira-frequency mehendi vibration, iyo inoiswa kune iyo workpiece yezvipurasitiki zvigadzirwa, kuburikidza ne kushanda pamusoro uye mukati memukati mamolecular Kukakavara kunoita kuti tembiricha iendeswe kuchimiro kuti isimuke. Kana tembiricha yasvika panonyungudika peiyo workpiece pachayo, iyo workpiece yekumisikidza chiteshi inonyungudika nekukasira, uye ndokuzadza musiyano uripakati penzvimbo. Kana iyo vibration yamira, iyo workpiece panguva imwe chete yakanyoroveswa uye yakagadziriswa pasi peimwe kumanikidza. , kuti vabudirire zvakakwana kutenderera.
Iyo sonotrode-inobata ruoko yeiyo ultrasonic welding (kusunga) iri nyore uye inobatsira, inokodzera kuruboshwe- kana kurudyi-ruoko oparesheni. Iyo yakagadzirirwa neyakareruka mweya-kutonhora system, iyo inodzivirira chishandiso kubva pakupisa uye chanza kubva kudikitira uye nenzira iyi inofambisa kutonga uye kunyatsoita mashandiro.
Iyo ultrasonic ruoko-yakabata sonotrode yakagadzirirwa neiyo ultrasonic jenareta mhando Sooonic HpW. Nyanga uye mubato zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, izvo zvinoita kuti huve nehupenyu hurefu uye hunyoro mashandiro.
Kumhanyisa kwekushambidza: anenge masekondi mashanu, zvinoenderana nezvinhu uye nemhedzisiro inodiwa.
Iyo ultrasonic tekinoroji inovimbisa yakasimba uye yepamusoro-soro yekutenderera pakati pezvakaungana zvikamu pasina kushandisa zvimwe zvekuwedzera.
Chigadzirwa Magadzirirwo: 1 - Welder ruoko runogona kuiswa kune imwechete poindi yekumonera, sikuruu implant, riveting. ndezvidzidzo zvishandiso zvemhando, kunyanya kune rhinestones / PC chibooreso chakakwira muhaute couture kugadzira .5 - Ultrasound goho size inogona kugadziridzwa.
Strong Output Handheld Ultrasonic nomoto muchina ...
Ruoko rwakabata Ultrasonic Welding Pfuti Nekugadzirisa ...
Yakachena Edge Ultrasonic Spot Welding Firimu Trimmi ...
800W Ultrasonic Spot Welding Machine Yakaderera Energy ...
Digital jenareta Ultrasonic Welding Equipment ...